NDỊ EKPERIME KATSỊNA CHEGHARỊRỊ:NDỊ SOJA NA-AKWANYERE ANYỊ ỌKỤ – hoo!haa!!
NDỊ EKPERIME KATSỊNA CHEGHARỊRỊ:NDỊ SOJA NA-AKWANYERE ANYỊ ỌKỤ
Katsịna: Ndi ekperime chegharịrị echegharị ekwuola aka ndị soja na ndị Uwe Ojii ụfọdụ dị n’ịkwanye ọkụ na ya bụ mwakpo na ntọrị ha na-emebu na Katsịna Steeti maka ihi ego.
Ha kwukwara na obodo agaghị adị mma ma ọ bụrụ na ndị ọrụ nchekwa ndi ahụ esepụghị aka enwe n’ofe.
Ndị otu ndị ekperime ahụ kwuru nke n’ụbọchị Wenezdee, izu ụka gara aga n’ọgbakọ ha na Gọvanọ Steeti ahụ bụ Aminu Bello Masari nwere n’ogige ụlọ akwụkwọ Gbagegi Primary School, Dankolo dị n’Okpuru Ọchịchị Dandume.
Nsogbu mwakpo, ntọrị nakwa ohi ehi tọdoro steeti ahụ n’akpịrị mere Gọvanọ Masari jiri kpebie inwe mkparịta n’etiti ya na ndị ekperime ahụ.
Onyeisi ótú n’ime òtu ndị ekperime ahụ, Idris Yayande, gwara Masari na udiri oke ego ndị nchekwa na-anapụ ndị mmadụ bụ ọgbata uhie nye ọrụ nchekwa na steeti ahụ.
O kwuru sị:”Ndị soja, ndị uwe ojii nakwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ na-akwanye ọkụ na mwakpo, ntọrị nakwa arụrụ ala ndị ọzọ a na-eme na steeti a site na nnukwu ego ha na-anapụ anyị iji kwado anyị. Anyị enweghịkwa ntụkwasị obi n’ebe ha nọ Ọ ka mma na anyị na ndị nche ogbe rụkọrọ ọrụ.
N’ịdọnyere ya ukwu, Onyeisi ndị òtu Volunteers (Yan-sakai), Lawal Tsoho, boro ndị soja, ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ nọ na steeti ahụ ebubo imegide mkparịta ụka ndị ekperime na Gọọmenti maka na ha na-erite uru na ya bụ nsogbu. Ọ kwukwara sị, “E ji m ihe akaebe”
Onye òtu ha ọzọ bụ Haruna Mazge, sị na ụta maka nsogbu nchekwa na steeti ahụ dịrị ndị ọrụ “ndị nọchiworo kwanarị iri asaa (70%) n’ime ụzọ ehi si aga na steeti ahụ”
Masari kwupụtakwara njikere ọ dị inyere ndị Fulani bi n’ime ọhịa aka ma rịọkwaa ka ha nabata mkparịta ụka udo ahụ.
Previous Post: ỤKỌCHUKWU ANWỤỌLA N’EBUMỌNỤ ABALỊ IRI ATỌ
Next Post: NTIKPỌ ỤLỌ EKPERE ALAKỤBA:O NWEGHỊ IHE NA-EME- WIKE